Tontolo iainana indostrialy - Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd.
Fanaraha-maso ny fiarovana ny tontolo iainana ny gazy flue
Ny rafitra fanaraha-maso ny famoahana gazy mitohy (CEMS) dia manondro fitaovana iray izay manara-maso hatrany ny fifantohana sy ny famoahana totalin'ny gazy gazy sy ny singa bitika avoakan'ny loharanon'ny fahalotoan'ny rivotra ary mampita ny vaovao any amin'ny manam-pahefana mahefa amin'ny fotoana tena izy. Amin'ny alàlan'ny santionany eo an-toerana dia refesina ny fifantohan'ny fandotoana ny entona misy, ary ny refy toy ny hafanan'ny etona, ny tsindry, ny tahan'ny fivezivezena, ny hamandoana ary ny atin'ny ôksizena dia refesina miaraka amin'izay, ary ny tahan'ny famoahana sy ny haben'ny flue isaina ny loto maloto.
Taorian'ny nidiran'ny entona santionany tamin'ny kabinetra famakafakana, ny hamandoana ao amin'ny entona santionany dia nosarahana vetivety tamin'ny alàlan'ny rafitra dehumidification ary nesorina ny rano mihombo. Ny rafitra dehumidification amin'ny ankapobeny dia misy condenser, paompy santionany, paompy peristaltika ary fanairana mifandraika ary singa mifehy. Ny paompy peristaltika dia ampiasaina amin'ny famoahana condensate.
Ny lesoka iraisan'ny rafitra fanaraha-maso an-tserasera ny gazy dia: ny vokatra mangatsiatsiaky ny condenser dia tsy mety, ary ny hamandoana be ao amin'ny entona santionany dia tsy misaraka, izay misy fiatraikany amin'ny fandidiana mahazatra ny mpandinika gazy flue. Raha mandeha maharitra izy io dia hanimba ilay mpandinika.
Ny fanaraha-maso ny etona dia mila miantoka mafy ny fihenan'ny rafitra fanaraha-maso. Noho izany, ny rafi-pamoahana condensate dia takiana mba hananana tery tsara hisorohana ny rivotra ivelany hiditra ao anaty condenser amin'ny alàlan'ny rafitry ny rano ary misy fiatraikany amin'ny entona santionany.
Ny condensate dia manana firafitry ny simika sarotra ary mahazaka. Noho izany, ny rafitry ny fantsona condensate dia tsy maintsy misy fanoherana tsara harafo. Rehefa tsy tsara ny vokan'ny fanivanana entona santionany dia hisy poti-javatra mivaingana ny rano mihoampampana, ary ny rafi-pamoahana ny rano mihoampampana dia tokony hatao mifanaraka amin'ny tsiranoka mahery vaika. Ny paompy fanarian-drano dia tokony hifanaraka amin'ny tontolon'ny banga ary afaka mandeha tsy tapaka.
Paompy peristaltika andiany KT15
• Ny lohan'ny paompy Fluid KT15 dia mety amin'ny ID0.8 ~ 6.4mm, ny hatevin'ny rindrina1.6mm Voatahiry, fantsom-pandrefesana, Viton sns, afaka mihazakazaka hatrany ambany ao anatin'ny 100rpm sy ny tahan'ny fivezivezena Max 255ml / min, ny elanelam-potoana misy, 250rpm hafainganam-pandeha , max flow r nihinana 630ml / min.
• KT15 paompy lohan-doha amin'ny fantsom-batana amin'ny alàlan'ny firafitry ny elastika mahazatra, afaka manome elanelam-potoana mikoriana tsara sy androm-piainana tsara fantsona.
• Ny elanelana fantsona faneriterena dia azo alaina tsara, mety amin'ny hatevin'ny rindrina samihafa sy ny tsindry bebe kokoa.
• Vatan'ny lohan'ny paompy amin'ny alàlan'ny akora PPS, vatosoa mihodina mampiasa fitaovana PVDF, toetra mekanika tena tsara ary fanoherana simika.
• Saron-doha paompy amin'ny fampiasana plastika translucent, fandinihana ny lohan'ny paompy miasa tsara, manakana tsara ny fako ivelany ho lohan'ny paompy, ny fikatonan'ny varavarana misokatra (tsy voatery).
• Ny fantsom-pametrahana dia misy karazany roa: ny mpampitohy natsangana sy ny fantsom-piraisana lohataona, izay mety amin'ny filàna miasa bebe kokoa.
• Motera karazana stepper 57 stepper, motera syncélous AC ary fiara maotera AC / DC, fomba fikirana ho an'ny tontonana sy ambany, mety amin'ny fampiasana fitaovana sy fitaovana kely sy salantsalany miovaova izy io.
Paompy peristaltika andiany TY15
• Lead Fluid TY15 （lohataona mora entina head lohan'ny paompy mandrafitra ny famolavolana firafitry ny enta-mavesatra mora entina, fanindriana ambony, fananganana lohataona lohataona, mora apetraka ny fantsona ary manana androm-piainana lava kokoa.
• Ny vatan'ny roller dia manana famolavolana kodiarana fihazonana, ary ny fantsona dia manana fahamendrehana mihazakazaka avo kokoa.
• Fitaovana mpampitohy fantsona manokana, raikitra tsara ny fantsona.
• Ny masinina manontolo dia vita amin'ny fitaovana avo lenta miaraka amin'ny toetra mekanika avo lenta ary ny fanoherana simika tsara.
• Mety amin'ny karazana motera. Mety amin'ny rindranasa mikoriana antonony, azo ampiasaina amin'ny fitaovana, fitaovana, laboratoara sns, mety amin'ny COD, CEMS fanaraha-maso an-tserasera.
Tombony amin'ny paompy peristaltika fluid fluid
1. Manana rivotra tsara izy io, tsy mila valizy sy tombo-kase, ary tsy hisy fisintahana sy siphon ranon-javatra hitranga. Na dia tsy mandeha aza ny paompy dia hohosorana sy hasiana tombo-kase tsara ny fantsona, izay afaka misoroka ny rivotra ivelany hiditra ao anaty condenser amin'ny alàlan'ny rafitry ny rano ary misy fiatraikany amin'ny valin'ny fandinihana entona.
2. Rehefa mamindra ny tsiranoka, ny tsiranoka dia tsy mifandray afa-tsy amin'ny lava-kazo anatiny. Ny fisafidianana fantsona vita amin'ny fitaovana mahazaka harafesina mety hampiasaina handefasana condensate mety hanimba mandritra ny fotoana maharitra.
3. Miaraka amin'ny herin'ny herinaratra ambany, rehefa mamindra ny tsiranoka misy sombina matanjaka, dia tsy hisy ny olana amin'ny fametahana, ary tsy hisy fiantraikany amin'ny androm-piainan'ny paompy.
4. Miaraka amin'ny fahaizan'ny self-priming matanjaka, ary afaka maina ny paompy nefa tsy misy simba, afaka mandany tsara ny condensate izy ary mampihena ny vidin'ny fikolokoloana.